Ra'iisalwasaraha: kuwa diidmada la siiyey waa in ay dalka iskaga baxaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ra'iisalwasaraha: kuwa diidmada la siiyey waa in ay dalka iskaga baxaan
La daabacay måndag 18 mars 2013 kl 10.24
Ra'iisalwasaraha Iswedhen Fredrik Rainfeldt oo xalay markii ugu horeysey uga waramayey barnaamijka Agande oo ka baxa telefishinka SVT arintii xasaasiyada badan dhalisey ee la xiriirtey aqoonsi kontoroolka uu bariyahaan ku howlanaa booliska xadka ayaa waxuu sheegay in siyaasada Iswedhen soogalooyiga ay tahay mid deeqsi ah.
Laakiin kuwo diidmada la siiyo ay tahay in dalka laga saaro. Reinfeldt oo ka waramayey mashruuca aad loo dhaleeceynayey waqtiyadii danbe ee Reva kaas oo booliska xadka ku ugaaranayey dadyowga sharci darada ku jooga ayaa waxuu yeri sida tan.
- Waxaa laga dhigayaa in ay barlamaanka ka buuxaan xisbiyo badan oo taageersan soogalooti aan xadidneyn laakiin aniga ma arko hal xisbi oo taageersan arintaas.
Reinfeldt ayaa aad u dhaleeceeyey siyaasiin sida uu sheegay aad moodo in aysan fahamsaneyn saameynta ay yeelan karto sharuucda ay dejiyaan.
- Waxaan la yaabanahey siyaasiinta u hadlaya sida in ay dalka ka jirto siyaasad soogalloti oo aan xadidneyn taas oo ah wax aan jirin. Waxaa haboonaan laheyd in siyaasiinta ay ku dhabar adeygaan sharuucda xeerarka ay dalka u dejiyeen, ayuu yeri Fredrik Reinfeldt.